मेरो नाङ्गो फोटो देखाएर जव उसले मलाइ ‘ब्ल्याकमेल’ गर्यो…! « Sajha Page
मेरो नाङ्गो फोटो देखाएर जव उसले मलाइ ‘ब्ल्याकमेल’ गर्यो…!
प्रकाशित मिति: November 1, 2017
बागबजारबाट घर आउंदै थिएँ । फोन बज्यो ।
‘कहाँ हो तँ ?’ स्वर केहि परिचितनै थियो ।
‘किन फोन गरिस् फेरी ? मैले भन्देको छु ! मेक दिस लाष्ट कल है !’ मैले रिसाउँदै भनें ।
उसँग भर्खरै ब्रेकअप भएको थियो मेरो । उ खास मान्छे थिएन । कसैको वियोगमा कोहि साथी खोज्दैगर्दा भेटिएको थियो उ । र नचाहेरै पनि नजिक बनेँ उसँग ! ‘ मलाइ मेरो बिगत बिर्सनु थियो, बस् !’ पछी त्यहि यादहरु बिस बनेँ !
कहिलेकाहीं तिनै यादहरुले खुब सताउँछ !
‘ओके म लाष्टनै बनाउँछु यो कललाइ ! तेरा केहि फोटोहरु मसँग रहेछ, त्यहि फिर्ता गर्न हो ! फेसबुकमा पठाएको छु !’
‘कलेजमा भेटेर कुरा गर्दै जाँदा, उ राम्रो लाग्न थालेको थियो । मनै त हो बरालिँदो रहेछ । मेरा प्रेमहरुको लिष्टमा उ तलनै पर्थ्यो सायद । तर पनि म एक्लो थिएँ । घरको पीडा, काठमाडौँको संघर्ष अनि रुमल्लिरहने मन । अहँ… केहि पनि बसमा थिएन ।
‘कति सहजै मेरो वर्तमान र मैले सोचेको भविष्य बिगत बनेको थियो । एक कल पनि होइन, एक एसएमएसका भरमा उसले मलाइ छोडेको थियो मेरो बिगतले त्यो दिन । मैले लाख कोसिस गरें उसलाई मेरो जीवनमा फिर्ता ल्याउन, तर सकिन । सायद मेरो भाग्यमा उ लेखेको थिएन । त्यहि बिगतको पीडाका बीच उसलाई चिनेको थिएँ ।’
उमसँग यति नजिक हुन थाल्यो कि के भनौं, मेरो मन आफैं बसमा थिएन । हेर्दा चिटिक्क परेको, भलादमी । एक मनले त सोचेको थियो, ‘यो सायद मजस्तै होला । देख्नमा मात्र सोझो । अर्को मनले फेरी सोच्यो, ‘अहँ केटाहरु त्यस्तो हुन्नन् । मैले एउटी केटिका लागि जीवनभर बिहे नगर्ने केटा, छोराछोरी भएर पनि कसैको वियोगमा मातिएर हिंडेको केटा देखेको थिएँ, अझै कहिलेकाहीं देख्छु गल्लीहरुमा, चोकहरुमा । त्यसैले उसलाई गलत सोच्नु हुन्न भन्ने कुरा मेरो मनले मलाइ भानीरहेको थियो ।
एकदिन कलेजबाट फर्कंदै गर्दा उ मसँग बोल्यो, ‘कता बस्नुहुन्छ ?’
मैले मेरो ठेगाना बताएँ । उसको डेरा पनि त्यति रहेछ । उसले मलाइ त्यता देखेका हुनाले पनि सोधेको रहेछ। मलाइ सधैं घर पुर्याईदिने र सधैं कलेज स्कुटरमा ल्याईदिने मेरो साथी त्यो दिन कलेज आएको थिएन । उसँग पनि छुट्टै कहानी छ । कुनै अर्को बसाइमा सुनाउंला । त्यो दिन उ र म सँगै घर गयौं ।
‘त्यो सधैं तिमीसँगै आउने र तिमीलाई घर लैजाने साथी को हो ?’ उसले केहि सिरियस भएर भन्यो ।
मैले मेरो दाइ पर्ने हो भनेर ढाँटे । उसको मुहार केहि चहकिलो भएको देखें ।
उसको मनमा मप्रति केहि घुमिरहेको छ भन्ने मलाइ थाहा भइसकेको थियो । यसै पनि उसम्म आइपुग्दा म केटाहरुको मनोभावना बढीनै बुझ्ने भइसकेको थिएँ ।
‘एक्लो थिएँ । मलाइ सधैं कलेज ल्याउने र लाने साथी बाहेक । उसले मलाइ जति आफ्नो सम्झे पनि, किन हो किन म उसलाई हरेक पटक ढाँटिरहेको हुन्थें । मेरो परिवारको बारेमा, मेरो बारेमा, मेरो प्रेम जीवनको बारेमा म हरेक कुरामा उसँग झुट बोल्थें । तर पनि हरेक बिहान मलाई लिन आइपुग्थ्यो, हरेक दिन कलेज सकेर मलाइ घर पुर्याईदिन्थ्यो । म उसलाई साबिकको भाषामा प्रयोग गरिरहेको थिएँ ।
थाहा छ उसले मलाइ खुब माया गर्छ । मलाइ घरबाट कलेज ल्याउने र लाने उसको दैनिकीका सबैभन्दा मीठा पलहरु थिए । अहँ…तर पनि कहिले पनि मनैले उसलाई आफ्नो कहिले पनि मानेन । उसले मलाइ औधि माया गरेपनि, उसलाई कहिले झुट बोलेर त कहिले नाटक गरेर आफ्नो कलेज जाने र आउने भाडा बचाईरहें ।’
के सोचेको ?’ उसले घर आइपुग्दै गर्दा भन्यो ।
‘केहि होइन, तपाईं कति राम्रो देखिएको !’ मैले उसको इसारा बुझ्ने प्रयास गरें !
‘होर ? तपाईं पनि खुब राम्री नि !’ उसले थप्यो ।
‘होर ? प्लीज मलाइ तपाईं नभन्नुस न ! तिमी भने हुन्छ !’ मैले भनें !
‘र… मलाइ पनि ! उसले थप्यो !
अरु केनै चाहिन्छ र माया बस्न । बस् थोरै बहाना न हो । नम्बर साटासाट भयो । घुमघाम सुरु भयो ।
मेरो कमजोरीनै यहि हो, जो मैले जीवनमा कुनै दिनपनि सुधार्न सकिन । मलाई मान्छेको लत जो लागेको थियो । यौन भनेको स्वाद रहेछ, थाहा नपाउँदासम्म कस्तो होला भन्नेमात्र तृष्णा । थाहा पाएपछि यो त ड्रग्सजस्तै हुँदोरहेछ । नभई नहुने । एउटा नशा ।
अरुलाई जस्तै आफ्नो सोझोपनको सबै कोणहरु देखाएर आफ्नो परिवारको पीडाहरु देखाएर, आफ्ना जीवनका दुखान्त कथाहरु सुनाएर मैले उसलाई मलाई ‘बिचरा’ भन्ने बनाएँ ।
एक दिन चोभार घुम्न जाँदा मैले भनें, ‘तिमीसँग आजसंगै बस्छु नि ! म एक्लै छु कोठामा !’
उसले खुसी भएजसरी ‘हुन्छ’ भन्यो । हुन्न भन्ने कुरा पनि थिएन । किनकि उसको मनमा आज केसम्म हुन्छ भन्ने चाहा पलाईसकेको थियो । जो हरेक केटा वा केटिको मनमा पलाउनु स्वाभाविक हो । मेरो चाहाना पनि त्यहि थियो त्यो दिन ।
त्यो रात सँगै बसियो ।
‘अलि अलि पिउने हो ?’ उसले केहि लाज मानेर सोध्यो ।
‘अँ ! मैले त कहिले पनि खाएको छैन ।’ त्यो बेला रक्सीको नशा नभएपनि चाखेको थिएँ । आफ्नै काकासँग बस्दा उसले जवरजस्त चखाएको थियो ।
‘नाइँ मलाइ त डर लाग्छ !’ मैले फेरी झुट बोलें ।
‘केहि हुन्न !’ उसले सम्झायो र पिलायो अलिकति !
अलिअलि गर्दा गर्दै खुब पीइएछ त्यो दिन ! जवानीको छुट्टै मज्जा लिइयो फेरी एकपटक ! उसले कताकता केके गर्यो आफैंलाई याद भएन ! तर मज्जा आयो खुब त्यो दिन !’
उसँगको सम्बन्ध धेरै भएको थिएन । तर शारीरिक सम्भोग हाम्रो दैनिकीजस्तै भइसकेको थियो । मेरै डेरा नजिक बस्थ्यो उ ! उसैको डेरामा थुप्रै दिनहरुलाई रात बनाएर बिते ।
पछी एकदिन थाहा भयो, उ विवाहित रहेछ । उसकी श्रीमती जागिरे रहेछे । मलाइ करिव ४ महिनापछी मात्र यो कुरा थाहा भयो । एउटी केटि सधैं दाइको कोठामा आउँछे, त्यो को हो भनेर छिमेकीले उसकी श्रीमतीलाई सोधेपछि यो सब कुरा थाहा भएको थियो मलाई !
उसकी श्रीमतीले मलाई चिनी भने नजिकै रहेको मेरो डेरा भएको घर र मेरो भाइसमक्ष यो कुरा पुग्छ भन्ने डरले म केहि बोलिन । त्यहि डरले म उसँग टाढा बनें ! सधैं ! उसलाई अन्तिम एसएमएस गरें ! ‘साला धोकेबाझ ! अर्को पटकदेखि तेरो अनुहार नदेखाएस् !’
उसले केहि रिप्लाई गरेको थिएन । आज एक्कासी उसले फोन गरेको थियो ।
उसले कलमा यति भन्यो. ”ओके म लाष्ट नै बनाउँछु यो कललाइ ! तेरा केहि फोटोहरु मसँग रहेछ, त्यहि फिर्ता गर्न हो ! फेसबुकमा पठाएको छु !’
फेसबुक खोलें ! उसले लामो सन्देश पठाएको रहेछ, ‘हो म विवाहित थिएँ । तर मेरी श्रीमतीदेखि म न शरिरले खुसी छु न मनदेखि ! तँ मन पर्यो त के गरौँ ? ल तँलाई तेरो फोटो पठाएको छु ! तँलाई दु:ख दिएँ सरी ! तर नबोलेर, मलाई नभेटेर यस्तोपनि नबना कि कुनै दिन तेरो माया ‘सुन्य’ होस् ! अझै माया गर्छु तँलाई ! तेरो माया कुनै दिन सुन्य भयो भने म जेपनि गर्न सक्छु, मर्न पनि र कसैलाई मार्न पनि !’
तस्विर मेरो थियो । पुरै नाङ्गो ! पोज पोजमा जवानी बिसाएका यादहरु । उसको सन्देशले उसले कतै न कतै मलाई ब्ल्याकमेल गरिरहेको छ भन्ने बुझ्न गाह्रो थिएन । मलाइ पनि ठूलो डर थियो । उसैले मलाइ विभिन्न अश्लील भिडियोहरु देखाएको थियो । त्यसैगरी उसले ती फोटोहरु बाहिर ल्याउला भन्ने डर थियो मलाइ ।
मैले बुद्धिमानीपूर्वक सोचें र उसलाई रिप्लाई गरें, ‘आज भेट्छु तँलाई ! धेरैपछी फोन गरिस् ! किन हो किन तेरो खुब माया लाग्यो !’
केहि छिनमा उसले कल गर्यो, ‘मेसेज हेरिस ?’
‘घरमा नेट छैन ! पछी हेर्छु । किन हो किन तँलाई भेट्न मन लाग्यो ! घरमा एक्लै हो भने आउंछु !
‘नाइँ घरमा त हुन्न ! बाहिर कतै भेटौं !’
‘होइन किन आज बुढी छिन र ?
‘होइन बुढी त बाहिर छिन !’
‘मलाइ फेरी त्यहि कोठामा, त्यहि पलङमा रमाइलो गर्न मन छ ।’ मैले भनें ।
‘है ! उसले थप्यो । अँ ! आइजो न त…. तर अलि होसियार भएर है !’ उसले सुनायो ।
‘हुन्छ’ मैले जवाफ फर्काएँ । त्यो रात उसकै घरमा भेटियो । मैले उसलाई आफुले पनि उसलाई बिर्सिन नसकेको कुरा भनें ! उ फुरुंग भयो !
त्यो रात पिउने अफर मैले आफैं गरें ! उसले मान्यो । बुद्धि पुर्याएर आफु कम खाएर उसलाई झ्याप बनाएँ ! शरीर चखाएं ! माया गराएँ ! र पागल पागल बनाएर उसलाई ढलाएं ओच्छ्यानमा !
‘आज तेरो र मेरो सबै फोटोहरु हेर्न मन छ, देखा न !’ मैले भनें !
उसले सबै देखायो । मलाइ थाहा नै नदिइ उसले थुप्रै फोटो र भिडियोहरु बनाएको रहेछ ।
मैले बुद्धि पुर्याएर उसलाई आफ्नो शरीर चखाउदै सब डिलिट गरें ।
‘ले मोबाइल आज म पनि खिच्छु !’ म तम्सिएं ‘ उसका नांगा फोटोहरु खिचें र मेरो फेसबुकमा उसको एकाउन्टबाट पठाएँ । त्यो रात रक्सीले उ सार्है मातिएको थियो । र मेरो उदेश्य अर्कै थियो ।
त्यो बिहान उ नउठी निस्किएँ ! अन्तिम पटक उसैको फेसबुकमा मलाइ पठाएजसरी मेसेज छोडें !
‘साले खाते, मलाइ खुब ब्ल्याकबेल गर्न खोजेको थिइस् होइन ! मेरो त सब डिलिट भए, अव तेरा फोटोहरु मसँग छन् ! तैंले तेरो बुढीका खिचेका नाङ्गा फोटाहरु जुन तैंले ल्याबटपमा राखेको थिइस, मैले सब सारेको छु ! सारेको पनि थिएँ ! उसलाई फकाएर सबै फोटोहरुलाई मैले मेरो बनाइसकेको थिएँ । ‘बिचार गर ! मलाइ फोन नगर ! सब ठिक हुन्छ… नत्र…!’
उसले मेसेज हेरेको थाहा पाउनेबितिक्कै उसलाई फेसबुकबाट हटाएँ ! उ मेरो ब्लकलिष्टको पहिलो मान्छे थियो सायद !
लागेको थियो उसले मलाइ फोन गर्नेछ ! आजसम्म गरेको छैन त्यसपछि ।’
एउटा एसएमएस आएको थियो, तेरो फोटो मसँग केहि छैन, तर मेरो बुडीको फोटो बाहिर आयो भने तँलाई मार्छु म !’ मैले उसको मेसेज र उसकी बुडीको सबै फोटो डिलिट गरें !
उ बोल्दै गइ, म सुन्दै थिएँ ।
‘म चानचुने मान्छे होइन ।’ जसजसले मेरो शरीरसँग खेलेका छन्, जस जसले मेरो बुबु चुसेका छन्, र मलाई धोका दिएका छन् । सबलाई ठेगान लाउँछु एक दिन !’
उसको कुरा सुनेर पहिलो पटक उदेखि डर लाग्यो । यसले आफ्ना कथाहरु सुनाएर मलाइ कतै फसाउँदै पो छैन !’ भन्ने शंका लाग्यो !
‘आज बाबासँग बजार जानु छ ! तिमी घर एक्लै जाउ है ! मैले नम्र स्वरमा भनेको थिएँ ।
उ रिसाउँदै बोली ! ‘हुन्छ ! यो केटि त्यति कमजोर पनि छैन कि आफ्नो घर एक्लै जान नसकोस् ! ओके भोली भेटौंला !’
‘नरिसाउ है !’ मैले सम्झाएँ ।
‘लौ किन रिसाउनु ! बाबासँग घुम्ने सौभाग्य सबैले पाउँदैनन् ! त्यसैले जानुस् !’
उसका आँखा टिलपिलाएका थिए ।
मैले बिदाइका हात हल्लाएँ ! उ गइ ! भोलि फेरी भेट्ने बाचासहित !
(सुरज प्याकुरेलको प्रकाशोन्मुख कृति ‘रिमाज’को एक अंश)
कम छैन नेपाली गायक गायिकाको कमाई, मासिक कसको कमाइ कति हेर्नुस सम्पुर्ण कलाकार को विवरण – थाहा पाउदा तिन छक परिन्छ(भिडियो सहित)
काठमाडौँ, १५ कार्तिक | यस पटकको कन्सर्टबाट १ करोड रुपैयाँ जति कमाइ हुन्छ, अघिल्लो वर्ष दुई महिनाका लागि अमेरिकामा कन्सर्ट दिन जानुअघि गायक राजेशपायल राईले एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका थिए— ‘एउटा कलाकारको दु:ख, मेहनत तथा सफलताको शिखरमा पुग्न उसले गरेको संघर्ष सम्झने हो भने यो रकम पनि कम हुन्छ ।’
राजेशपायलले त्यति बेला भनेका थिए—‘साढे दुई दशक हुन लाग्यो, यत्तिका वर्षसम्म म नेपाली गीत–संगीतमै लागिरहेको छु, त्यसैले यो रकम ठूलो हो भन्ने मलाई लाग्दैन ।’ राजेशपायलले औसत नेपाली कलाकारको तुलनामा उक्त पारिश्रमिक केही बढी भए पनि आफ्नो हकमा भने सामान्य भएको उल्लेख गरेका थिए । हेर्नुहोस अन्य चर्चित गायिका हरुको कमाइ ?
– बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री प्रियंका चोपडालाई न्युयोर्कको पार्क मै यस्तो गरे पछी ! (रियल भिडियो लिक)